Madaxweyne Farmaajo oo kulan aan caadi ahayn maanta la yeeshay wakiilada beesha caalamka – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Farmaajo oo kulan aan caadi ahayn maanta la yeeshay wakiilada beesha caalamka
Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa maanta xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magalada Muqdisho kulankii ugu horeeyay kula yeeshay wakiilada beesha caalamka.
Kulankaasi oo ahaa mid saacado socday islamarkaana ay dalbadeen wakiilada beesha caalamka ayaa looga hadlay wadashaqeyn dhex marta labada dhinac iyo sidoo kale waxyaabaha deg-dega ah ee horyaala madaxweynaha cusub.
Sidoo kale, kulanka ayaa looga hadlay caleemo saarka madaxweyne Farmaajo iyo sidii uu xilka kula wareegi lahaa.
Wakiilada beesha caalamka ee uu hogaaaminaya Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Michael Keating ayaa sheegay in kulankaasi uu ahaa mid hordhac ah islamarkaana uu si wanaagsan kusoo dhamaaday.
Kulanka ayaa sidoo kale la sheegayaa inuu ahaa mid lagu dhageysanayay qorshayaasha madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo.
Si kastaba ha ahaatee, kulankaan ayaa kusoo beegmaya xilli maalintii shalay uu doorashada madaxtinimada dalka ku guuleystay Maxamed C/laahi Farmaajo, kaas oo dalka hogaamin doonna 4-ta sano ee soo socoto.